Synephrine HCL Powder - Dufanka gubi iyo miisaanka oo dheeri ah
/blog/Gallery/Synephrine HCL Powder - Dufanka gubi iyo miisaanka oo dheeri ah
Posted on 11 / 25 / 2019 by 阿斯劳 ku qoray Gallery.
1. Dulmarka Synephrine HCL
Maanta, boqolkiiba dad aad u badan ayaa raadinaya ikhtiyaarro si loo ilaaliyo culeys caafimaad leh. Hagaag, dhammaantood dhexdooda, isticmaalka Synephrine budada HCL waa mid ka mid ah siyaabaha ugu nabdoon ee aad uga ilaalin karto dufanka aan caafimaadka qabin. Budada Synephrine waa aaladda kiimikada alkaloid ee aan dhif iyo naadir aheyn in la helo. Waa walax dabiici ah oo laga helo dhirta sida liinta qadhaadh, iyo kuwo kale.
Waa sheyga bioactive ee ugu horreeya ee liinta qadhaadh kaas oo isticmaalkiisu uu soo laabanayo illaa iyo horraantii 1500s. Marka maxaa si sax ah loogu adeegsaday? Waagii hore, dheelitirkaan sixirka ayaa loo adeegsaday daaweynta arrimaha caloosha iyo mindhicirka sida calool fadhiga, calool xanuun, iyo lallabo. Qaybo ka mid ah adduunka, waxaa sidoo kale loo yaqaanaa dawayn waxtar u leh dawada lidka ku ah iyo sidoo kale dawada hurdo la’aanta iyo walaaca.
Soo bixitaankii teknolojiyadda, oranjiga qadhaadh ayaa hadda la caddeeyay inuu waxtar badan u leeyahay daweynta dhibaatooyin badan oo casri ah oo u dhexeeya cudurada fungal iyo jeermisyada bakteeriyada, xasaasiyadda, iyo caloosha. Adoo maskaxda ku heysa in qeybta ugu weyn ee oranjiga qadhadu ay tahay Synephrine HCL, waxay ku siineysaa sababta ay ugujirto sifooyinka badan ee bogsashada.
Qaab dhismeedka molecular Synephrine wuxuu la mid yahay kan loo yaqaan 'ephedrine', oo ah mid ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee dufanka guba. Si kastaba ha noqotee, Efesrine kuma sii jiro suuqa cuntada dheeriga ah; markaa, Synephrine waa bedelka ugu fiican. Octamine waa dheef-shiid kiimikaad Synephrine ah wuxuuna ilaa iyo haatan caan ku noqday astaamaha gubida.
Synephrine way shaqaysaa iyada oo loo marayo wax ka beddelka wax soo saarka tamarta ee jirka. Waxay tan u sameyneysaa iyagoo saameyn ku leh habka beerku u shaqeeyo, kaasoo horseed u ah abuurista enzymesyo badan isla markaana door muhiim ah ka ciyaara sharciyeynta dheefshiidka iyo wax soo saarka tamarta ee jirka. Cilmi baaris la sameeyay ayaa muujisay in Synephrine HCL (5985-28-4);
Waxay xaddideysaa glucosidase iyo amylase, kuwaas oo enzymes-ka mas'uul ka yihiin dheef-shiidka hunguriga adag. Sidaas awgeed, uma badna inay jiri doonaan qulqulaya sonkorta dhiigga ka dib-cuntada.
Waxay kordhisaa qaadashada gulukoosta muruqyada iyada oo loo marayo kicinta AMPK. Taasi waa enzyme-ka shaqadiisa uu yahay inuu dareemo heerarka shidaalka ee unugyada sidoo kalena uu kicinayo gubida dufanka. Intaa waxaa sii dheer, waxay kordhisaa qaadashada sonkorta unugyada.
Synephrine waxay kordhisaa xaddiga ATP ee la heli karo. Taasi waxay bixisaa tamar badan oo loo baahan yahay si looga caawiyo falcelinta kiimikada ee beerka.
Waxay kaloo ka hortagtaa u beddelashada sonkorta inay noqdaan dufanka.
Waxay kordhisaa gulukooska iyo burburka glycogen.
Synephrine waa firfircoone jilicsan ee alfa-1 iyo alfa-2 adrenoreceptors. Labada shaqo waxay ka jawaabayaan adrenaline sidaa darteed waxay kordhinayaan cadaadiska dhiigga qofka iyo garaaca wadnaha. Sidaa darteed, Synephrine 5985-28-4 uma badna inuu sababo kororka garaaca wadnahaaga ama cadaadiska dhiiggaaga.
Taasi waa farqiga ugu weyn ee u dhexeeya ephedrine iyo Synephrine 5985-28-4, maadaama loo yaqaan 'ephedrine' inay dhaqaajiso alfa-1 iyo alfa-2 adrenoreceptors labadaba.
Synephrine HCL sidoo kale waxay kicisaa soo-dhoweynta neuromedin U2. Kuwani waa maaddooyin ku yaal hypothalamus oo kordhiya feejignaanta.
Synephrine wuxuu u shaqeeyaa joojinta soosaarka eotaxin-1. Taasi waa maadada tilmaanta eosinophils si ay ugu guurto aag bararsan. Waxay sidoo kale xannibeysaa waxqabadka NADPH oxidase, oo ay soo saaraan neutrophils isla markaana, waxay abuurtaa noocyo badan oo oksijiin ah.
Iyada oo hoos loo dhigayo firfircoonaanta NF-kB, Synephrine waxay yareysaa bararka. Taasi waa sababta oo ah NF-kys xad dhaaf ah ayaa lagu yaqaanaa inay keento cudurro barar sida cudurka 'psoriasis', cudurka mindhicirka ku dhaca iyo sidoo kale neefta.
Synephrine waxay ku shaqeysaa iyada oo xannibaysa enzymes-ka butyrylcholinesterase iyo acetylcholinesterase, kuwaas oo waxyeelo u leh bukaanka Alzheimer.
3. Isticmaalka Synephrine HCL
(1) Synephrine HCL oo loogu talagalay Lumid Miisaan
Synephrine waa miisaanka lumay miisaanka kaas oo u shaqeeya siyaabo badan.
Sida a xakameyn cunto xumo- Ma waxaad tahay nooca qofka mar walba cunaya? Waxaan ula jeedaa, xitaa ka dib marka aad cunto culus qaadatid, calooshaadu ma qaaddo waqti dheer ka hor intaysan bilaabin inuu buuqo oo uu wax dawarsado. In kasta oo aad rabto inaad miisaan lumiso, tani waa mid ka mid caqabadaha aad kala kulmi karto. Nasiib wanaag, tan miisaanka lumay miisaanka Waxay joojineysaa gaajada waxayna ku boorineysaa cunnooyinka fudud, taasoo kaa dhigeysa inaad dhakhso u dareentid buuxa.
Sidaas awgeed, waad ku dhejin kartaa cuntadaada caafimaadka leh sidii loo qorsheeyay oo culays badan ayaa kaaga lumaya si aan khasab ahayn. Iyo ka hor intaadan xitaa ogeyn, waxaad daawan doontaa muuqaalkaas jirka ah ee khafiifka ah ee aad weligaa ku riyoon jirtay.
(2) Synephrine HCL sida Fat Burner
Dufanka xad-dhaafka ahi ma aha oo keliya khatar caafimaad, laakiin sidoo kale wuxuu kaa dhigi karaa inaad xun tahay. Dufanka gubanaya wuxuu la yimaadaa faa'iidooyin badan, oo ay ka mid tahay inuu cimri dheereeyo. Nasiib wanaagse, isticmaalka Synephrine HCL waa mid ka mid ah xeeladaha la xaqiijiyay ee aad u isticmaali karto inaad ku dhalaasho dufanka jirka. Waa tan sida ay kaaga caawineyso inaad gaarto hadafkan;
Kordhi heerarka tamarta inta lagu jiro fadhiga shaqada
Uma baahnid inaad qolka jimicsiga tagto oo aad dareentid dhammaan daal iyo hurdo; Synephrine wuu ku helay. Waxay u shaqeysaa sidii shidaal adiga oo ku quudinaya dhammaan tamarta aad u baahan tahay si aad u hesho kulan jimicsi dilaa ah. Jiir la maareeyey Daawada budada ah Waxaa la arkay inay awood u dabaasha dheer, taasoo muujineysa in heerarkooda tamar ay kordheen.
Iyadoo la hagaajinayo heerarka tamarta, Synephrine waxaa loo yaqaanaa inay xoojiso waxqabadka cayaaraha sidoo kale. Saameynta isku dhafan ee kordhinta kharashka tamarta dufanka iyo kicinta waxay dhiirrigelisaa waxqabadka waxayna kordhisaa xaddiga waxsoosaarka laga helay jimicsiga aerobic iyo anaerobic. Taasi waxay ka dhigaysaa kaabis weyn oo jimicsi kahor iyo a baruurta sidoo kale.
Daraasad lagu sameeyay laba-iyo-tobanka nin ayaa muujisay ka dib markii ay qaateen budadan miisaanka luminta afartan iyo shan daqiiqo ka hor jimicsiga inay kordhiyaan culeyskooda ugu badan. Waxay kaloo awoodeen inay sameeyaan ku celcelin intaa ka badan marka loo barbar dhigo placebo. Marka lagu daro kafeyn, Synephrine waxay kordhisay ku celcelinta maaddada maadooyinka ugu badan ee maadada.
Taasi waa habka loo jajabiyo dufanka jirka ku jira. Waxaa si fiican loogu sifeeyaa dheef-shiid kiimikaad. Synephrine wuxuu u shaqeeyaa iyadoo la kordhinayo heerka dheef-shiid kiimikaadka ee qofka taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah shidaalka gubanaya si dhakhso leh. Waxay sharraxaysaa sababta qaadashada Synephrine ay kaa dhigeyso inaad gubto dufan badan tan iyo markii dheef-shiid kiimikaad sarreeyo, jidhkaagu wuxuu u badan yahay inuu gaaro dufanka la keydiyay si uu wax badan u helo.
Daraasad lagu sameeyay waxaa lagu muujiyey iyada oo la adeegsanayo hal xaddig ah oo ah 50mg, heerka qiyaasta dheef-shiid kiimikaadka kor u kaca kuleylka 65-ka shan-iyo-tobanka daqiiqo ee soo socda. Markii lagu daro moleexinnada kale ee hesperidin iyo naringin, xoojinta dheef-shiid kiimikaadka ayaa la arkay inay kor u dhaaftay boqol iyo siddeetan kaloori. Qadarka noocan oo kale ah ee kaloriyada ayaa lagu gubay labaatan daqiiqo oo biro ah.
Qaadashada muruqyada sonkorta
Synephrine waxay shaqeysaa iyadoo kicineysa qaadashada gulukooska ee murqaha lafaha. Taasi waxay caawineysaa gubashada dufanka iyadoo laga saarayo gulukoos xad dhaaf ah nidaamka dhiigga. Waxay kaloo gacan ka geysataa bixinta muruqyada gulukooska oo si hufan loogu isticmaalo tamarta. Sidaa darteed, gulukoos intramuscular badan ayaa macnaheedu yahay xoogga muruqyada iyo mugga.
4. Qiyaasta Synephrine HCL
Qiyaasta Synephrine HCL waxay ku kala duwan tahay hal qof ilaa qof kale. Si kastaba ha noqotee, qiyaasta caadiga ah sida miisaanka lumay miisaanka waa 100mg maalintii. Cilmi baaris, si kastaba ha noqotee, waxay muujineysaa in qiyaasta 'Synephrine HCL' ee qiyaasta 35mg ay sidoo kale waxtar leedahay. The Qiyaasta Synephrine HCL waa inaanay ka badnaan 200mg maalin si looga fogaado sunta.
Haddii ay tahay markii kuugu horreysay ee aad qaadatid, ku bilow qiyaaso hoose oo qiyaastii ah 10-20mg si aad u qiimeyso dulqaadashadaada. Haddii aadan lahan waxyeelooyinka waxyeelada leh, waxaad u kordhin kartaa qiyaasta daawada si tartiib tartiib ah. Ha ku darin qiyaasta qaadashada illaa laba ama afar saacadood, maxaa yeelay tani waxay kuu horseedi doontaa waxyeelo daran.
Saameynta jirka ee Synephrine ama sida dufanka gubta, waa inaad hubisaa inaad qaadatid waxa ugu horeeya subaxa hore iyo shan iyo toban ilaa soddon daqiiqo kahor jimicsiga. Waxaa lagugula talinayaa inaad ku qaadato biyo.
Halka dadka qaarkiis laga yaabo inay doorbidaan inay kaligood qaataan 'Synephrine', kuwa kale ayaa laga yaabaa inay doorbidaan inay isdulsaaraan. Waad u adeegsan kartaa isku darka budo kale oo miisaan lumis ah iyo waliba kuwa tamartaada xoojiya. Yohimbine wuxuu si fiican ugu dhejiyaa Synephrine, gaar ahaan haddii ujeedadaada ugu weyni tahay inaad miisaanka dhinto.
L-theanine sidoo kale waa ikhtiyaar fiican maadaama ay si fiican isugu darayso wax kiciya. Shaqadeeda waa in ay hagaajiso saamaynta isla markaana ay kordhisaa shaqada garashada. Dhoobada cad ee qulqulaya ayaa sidoo kale lagu dari karaa kaydka saamaynta ay ku yeelatay falsafadeeda.
Caffeine sidoo kale waxay ka kooban tahay wanaagsan, ha ahaato qaab fuuq bax leh ama ha ahaato ilo kale sida guarana soosaarka.
5. Iibso Synephrine HCL Online
Shaki la'aan, Synephrine HCL waa mucjisada quduuska ah ee budada miisaanka luminta. Waxay kaa caawineysaa inaad xakameyso rabitaankaaga cuntada haddii aad higsato inaad wax yar cuntid ama aad yareyso qaadashada cunno fudud oo aan caafimaad qabin. Xitaa waxaad go'aansan kartaa inaad yareyso rabitaankaaga Waxyaabaha loo yaqaan 'supefrine' afar iyo labaatan saacadood haddii aad rabto inaad qaab dhakhso leh u hesho.
Sidoo kale, sida lagu muujiyey maqaalka, wuxuu kaa dhigayaa tamar, taasoo waxtar weyn leh, gaar ahaan markaad rabto inaad ka shaqeyso oo aad wax yar cuntay. Waqtiga ay qaadaneyso in laqabto, ma rumeysan doontid soddon daqiiqo gudahood, inaad la kulmi doonto saameynta. Saameyntani waxay kugu socon kartaa ilaa laba saacadood maaddaama nolosha nuskeed ee Synephrine ay tahay laba saacadood.
Haddii loo isticmaalo isku-darka cunno macquul ah iyo jimicsi, waxaad ogaan doontaa Synephrine bodybuilding iyo miisaanka luminta laba toddobaad gudahood isticmaalka. Qof kasta oo la halgamaya cunnada fudud, xad-dhaafka ah, ama mid dareensan inuu doonayo inuu ka takhaluso xoogaa dufan ah oo jirkooda ka jira, tani waa heshiiska dhabta ah!
Inta badan waxyaabaha dufanka leh waxaa lagu yaqaan inay kugu ridi karaan waxyeelada, laakiin waxaad rumeysaneysaa in Synephrine ay kuu fidineyso waxaas oo dhan oo aan naftaada khatar gelin? Inta badan dib-u-fiirinta Synephrine waxay soo bandhigaan waxyeellooyinka ugu yar ilaa eber wax layaabna leh caannimada.
Hadda oo aad go'aansatay inaad gaartid yoolalkaaga miisaanka, xagee ka heshaa baruurtan gubanaysa? Maaddaama shirkado badani ay kuu ballan qaadi karaan inay kuugu deeqaan Synephrine-ka ugu fiican, waa inaad aad uga taxaddartaa maadaama qaarkood ay kaa iibin karaan alaabooyin been abuur ah. Waxaan kugu siineynaa qiime lacagtaada adiga oo ku siineyno waxyaabaha nafaqada leh ee 'Synephrine supplements' ee badbaado leh oo wax ku ool ah. Mar adiga iibsan Synephrine anaga naga hel, waxaa laguu hubaa inaad gubi doontid baruur oo aad u dufan doontid xaydh dhakhso iyo joogto ah.
Kordhinta miisaankayaga dib-u-halista ma leh maaddaama ay yihiin 100% dabiici ah oo aan lahayn kudarin qarsoon. Dalbo budada 'miisaanka' miisaanka luminta ee maanta naga luma miisaanka aan loo baahnayn sidoo kale ku raaxee faa'iidooyinka jirka ee 'Synephrine'.
Tilmaamaha Xirfadlaha Caafimaadka ee Kabka Cuntada, ee uu qoray Shawn M. Talbott, Kerry Hughes, bogga 13
Cayil xad dhaaf ah: Cudurka faafa, cudurka 'Pathophysiology-and hort hort, Edition Second,' waxaa tafatiray Debasis Bagchi, Harry G. Preuss, bogga 538
Kaabista nafaqada ee Ciyaaraha iyo Jimicsiga, oo uu qoro Mike Greenwood, Douglas Kalman, Jose Antonio, bogga 231
Root Isotretinoin (Accutane) ee finanka: Daweynta finanka leh Isotretinoin
Sidee Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) ay ugu shaqeyso jirdhiska jirka	Sidee ayuu Orlistat u shaqeeyaa sidii Daroogada Miisaanka Maansada?